Ịchọta ígwè | December 2019
Olee otú iji tọghata MP4 na avi online
Editor Si NhọRọ December 12,2019
Isi Ịchọta ígwè
Ego ole ka ị chọrọ maka kọmputa?
Ezi ehihie Ihe edere taa bu RAM, ma obu ka o buru ibu na komputa anyi (a na - ebelata RAM - Ram). RAM na - arụ ọrụ dị ukwuu na kọmputa, ma ọ bụrụ na nchekwa ejughị - PC amalite ịkụda, egwuregwu na ngwa ngwa ngwa, foto dị na nyocha ahụ malitere ịtụgharị, ibu na diski ike na-abawanye.
Site na nnukwu igbe na obere nkan: mmalite nke PC ruo ọtụtụ iri afọ
Akụkọ banyere mmepe nke kọmputa na-esi na etiti narị afọ gara aga. N'ebe ndị ahụ, ndị ọkà mmụta sayensị malitere iji nlezianya nyochaa ohere nke ngwá electronic na ịmepụta ihe nlele nke ngwaọrụ ndị akara akara nke mmepe nke nkà na ụzụ kọmputa. Aha nke kọmputa mbụ na-ekewa n'etiti onwe ha site na ọtụtụ nrụnye, nke ọ bụla pụtara na n'otu oge ahụ n'akụkụ dị iche iche nke Ụwa.
Ịzụta kọmputa. Kedu esi eweghachi kọmputa na ụlọ ahịa ahụ?
Isiokwu a mere ka m dee akụkọ nke mere m ihe dị ka afọ gara aga. Ọ dịtụghị mgbe echere m na ịzụta ngwá ahịa nwere ike ịbịakwute m: ọ bụghị ego, maọbụ kọmputa ... Enwere m olileanya na ahụmịhe ahụ ga-enyere onye aka idozi nsogbu, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị nzọụkwụ na otu rake ... M ga-amalite nkọwa ahụ, ihe niile tinyere inye ndụmọdụ na otu kachasị mma ịghara ime ya ... Ee, ma mee ka ihe odide ala ala na eziokwu na mba anyị nwere ike gbanwee ngwa ngwa / gbakwunye, na mgbe ị na-agụ ihe, ikekwe isiokwu ahụ agaghị adịkwa mkpa.
Kọmputa draịva ndị China! Ebe nchekwa disk efu - kedu ka esi amata oke nke onye ọkara?
Ezi oge niile! Site n'ichebawanye na ngwaahịa kọmputa nke Chinese (ihe nkiri flash, diski, kaadị ebe nchekwa, wdg), "ndị omenkà" malitere ịpụta onye chọrọ ego na ya. Na, n'oge na-adịbeghị anya, omume a na-eto eto, ọ dị mwute ikwu na ... a mụrụ site na eziokwu ahụ na ọ bụghị ogologo oge gara aga, ha wetara m kọmputa USB dị ka nke ọhụrụ yiri 64 GB (zụrụ n'otu n'ime ụlọ ahịa ndị dị na China), na-arịọ maka enyemaka iji dozie ya
Esi chebe kọmputa gị site na mmeri oke - họrọ igwe nlekota mma
Ma na okpomọkụ ma na oyi anyị na kọmputa nwere ịrụ ọrụ, mgbe ụfọdụ maka ụbọchị na njedebe. Ọ naghị adịkarị ka anyị na-eche na arụ ọrụ kọmputa zuru ezu na-adabere n'ihe ndị anya na-adịghị ahụ anya, otu n'ime ndị a bụ ọrụ nkịtị nke onye na-ekpo ọkụ. Ka anyị gbalịa ịchọta ihe ọ bụ na otu esi ahọrọ onye kwesịrị nlekota maka kọmputa gị.
Nkọwa nke matrix types of LCD (LCD-, TFT-) monitors: ADS, IPS, PLS, TN, TN + ihe nkiri, VA
Ezi ụbọchị. Mgbe ị na-ahọrọ nyochaa, ọtụtụ ndị ọrụ anaghị aṅa ntị na nkà na ụzụ na-emepụta nke matrix (na matrix bụ akụkụ bụ isi nke ihe nyocha LCD ọ bụla na-etolite onyinyo ahụ), na, n'ụzọ, àgwà nke ihuenyo ahụ na-adabere n'ụzọ dị ukwuu (na ọnụahịa nke ngwaọrụ kwa!). Site n'ụzọ, ọtụtụ nwere ike na-arụ ụka na nke a bụ obere ihe, na laptọọpụ ọ bụla (dịka ọmụmaatụ) na-enye ihe magburu onwe ya.
Iri vidiyo kacha mma maka egwuregwu: ihe nile ga - aga n'ihu na "ultrax"
Ihe egwuregwu kọmputa nke oge a na-achọ ihe onwunwe kọmputa onwe onye. Maka ndị na-egwuri egwu n'ịgba chaa chaa dị elu na nke FPS, ọ dị oke mkpa ịnweta kaadị vidiyo dị elu na ngwaọrụ gị. E nwere ọtụtụ ụdị Nvidia na Radeon dị iche iche na nsụgharị dị iche iche n'ahịa. Nhọrọ ahụ gunyere kaadị vidiyo kacha mma maka egwuregwu na mmalite nke 2019.
Ịhọrọ nyocha maka egwu egwu: n'elu nke kacha mma na atụmatụ
Maka kachasị obi ụtọ site n'itinye egwuregwu kọmputa adịghị ezuru iji zụta ngwaike na njirimara na-agba ọsọ. Ihe kachasị mkpa bụ nyochaa. Ụdị egwuregwu dị iche iche site n'ọfịs na ọkwa, na eserese foto. Mpempe akwụkwọ nchịkọta nhọrọ Mkpebi Mkpuchi Anya: Nchịkọta Nlekọta Ndị Nlekọta Nwelite ọnụego Ụdị Ntọala Isiokwu: Nkọwapụta Njirimara Njikọ Njikọ nke Njikọ Nke Nyochaa Họrọ maka Egwuregwu - Top 10 Ahịa Ahịa Dị ala nke ọnụahịa ASUS ROG Strix XG27VQ LG 34UC79G Acer XZ321QUbmijpphzx Alienware AW3418DW Isiokwu: Ijikọta Monitors site na Nhọrọ Nhọrọ List Mgbe ị na-ahọrọ nlekota egwuregwu, ịkwesịrị ịtụle njirisi dị ka diagonal, mmeba, ume ume, ọnụọgụgụ na Ụdị njikọ.
10 kachasị mma kaadị maka ntanye cryptocurrency ke 2019
Ngwuputa ala na-aghọwanye ọnụ ọnụ maka onye ọrụ ọhaneze na-eweta ego ọ bụla. Maka ugwo onu ogugu na ugwo nke na-emeputa ihe bu iji nweta ngwa oru. E nwere nnukwu vidiyo dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche na ahịa, Otú ọ dị, ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ha kwesịrị ekwesị maka nsị.
Ndị ọrụ iji chọta pixel nwụrụ anwụ (otu esi elele anya, nwale 100% mgbe ị na-azụrụ!)
Ezi ụbọchị. Nyocha ahụ bụ akụkụ dị oké mkpa nke kọmputa ọ bụla na àgwà foto dị na ya - dabere ọ bụghị naanị na nkwekọrịta nke ọrụ, kama ọhụụ. Otu n'ime nsogbu kachasị mma na ndị nlekota bụ ọnụnọ nke pixels nwụrụ anwụ. Pixel mebiri emebi bụ isi na ihuenyo na-agbanweghị agba ya mgbe foto gbanwere.
Keyboard Gembird: esi edozi ngwa ngwa
Kọmputa nkeonwe bụ "nsọ kasịsị nsọ" nke onye ọrụ ọ bụla. Ma maka ndị na-amalite ọrụ na ndị ọrụ PC nwere ahụmahụ, ọ bụghị nanị na arụmọrụ nke ngwaọrụ, kamakwa àgwà nke components na ngwa ya dị oke mkpa. Ịrụ ọrụ na ngwa ngwa na-adabere na ngwongwo ngwaike, ya mere, a ghaghị inye nlebara anya nke usoro ịhọrọ ya.
Lee uru iji zụta Xaomi laptọọpụ na Russia
Ugbu a, ọ bụghị naanị ndị na-emepụta ngwá ọrụ anyị maara nwere akara nke kọmputa ha. Ngwaahịa ndị na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị na-amalite ịhapụ ọbụna ụdị ọrụ nke ngwa ngwa na ngwa ngwa ụlọ. Na nso nso a, Chinese Xiaomi enwetawokwa laptọọpụ ya niile. N'agbanyeghi mkpesa a na-ekwu banyere imewe, ngwa ndi ahu di mma ma chota otutu ndi mmadu.
Otu esi eji aghọ aghụghọ mgbe ị rụzi: kọmputa, laptọọpụ, ekwentị, wdg. Otu esi choputa ulo oru ndi ozo ma adighi ejide gi maka ịgba alụkwaghịm
Ezi ụbọchị. Taa, na obodo ọ bụla (ọbụna obere obodo) otu nwere ike ịchọta ihe karịrị otu ụlọ ọrụ (ụlọ ọrụ) na-arụ ọrụ kachasị iche iche: kọmputa, kọmpụta, mbadamba, telefon, TV, wdg. E jiri ya tụnyere 90s, ugbu a na-agba ọsọ n'ime ndị aghụghọ n'emeghị nnukwu ohere, mana ịbanye n'ime ndị ọrụ ndị na-aghọ aghụghọ "na-abaghị uru" abụghị ihe ezi uche dị na ya.
Enwere m ike iji kọmputa dị ka TV?
Kọmputa nwere ike iji ngwa ngwa dị ka TV, ma e nwere ụfọdụ nuances. N'ikpeazụ, e nwere ọtụtụ ụzọ isi lee TV na PC. Ka anyị lelee onye nke ọ bụla, ma nyochaa ọganihu na nkwenye nke onye ọ bụla ... 1. TV tuner Nke a bụ console pụrụ iche maka kọmputa na-enye gị ohere ile TV na ya.
MS Okwu Ọrụ nkwụsịghị: tinye ihe odide na ederede
Gbanyụọ Dr.Web anti-virus usoro
Ebe a na-echekwa screenshots na Windows 10
Esi wepu nje site na ihe nchọgharị
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ Wi-Fi na iPhone anaghị arụ ọrụ
Ugbu a, e nwere ọtụtụ ọkwa dị egwu dị iche. N'ụzọ dị mwute, ngwaọrụ dị mkpa anaghị akwado ụdị faịlụ a chọrọ, ma ọ bụ onye ọrụ ahụ chọrọ otu usoro, ma egwu echekwara adịghị adaba. Na nke a, ọ kachasị mma ime ntụgharị. GụKwuo
Belata size PDF
Anyị na-ewepu afọ na Odnoklassniki
https://termotools.com ig.termotools.com © Ịchọta ígwè 2019